Sunset,aphoto by ChanMyaSoe on Flickr. ဒီပုံလေးကိုရိုက်တုန်းက ဆရာတင်မိုးရဲ့ ဧည့်သည်ကြီးကဗျာကို သွားပြီး သတိရမိတယ်။ ဆေးလိပ်လည်းတို၊ နေလည်းညိုပြီ၊ ငါ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ကြပါလေ" တဲ့။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားလိုက်ရင် ဘဝဟာ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ မဟုတ်လား။နေထွက်တာရှိသလို နေဝင်တာရှိမယ်၊ ဖြစ်ခြင်းဆိုတာရှိရင် ပျက်ခြင်းလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိသလို လူတိုင်းသွားရမည့် သေဆုံးခြင်းဆိုတာလည်း ရှိတာကို သတိမူပြီး မသေခင်မှာ ကိုယ့်နောက်ပါသွားနိုင်တာလေးတွေ အချိန်ရတုန်း လုပ်ထားနိုင်ကြဖို့ ဒီပို့စ်လေးနှင့်အတူ နှိုးဆော်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
Hello Testing 1.8,aphoto by ChanMyaSoe on Flickr. Nikon 50mm 1.8D AF Lens စမ်းရင်း self portrait ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ဒီ Lens ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရလို့ ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ Fixed Focal Length ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပါတယ်။ Portrait အတွက်ကတော့ တော်တော်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ Lens လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ ဒီပုံကိုတော့ photoshop ထဲမှာ ကင်မရာက Nikon စာလုံးပေါ်အောင် Flip Horizontal ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ ဝေဖန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
Baby,aphoto by ChanMyaSoe on Flickr. Hanwell ပန်းခြံထဲမှာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပါ။ အဲဒီနေ့က 50mm Lens စမ်းမယ်ဆိုပြီး ပန်းခြံထဲရောက်သွားတယ်။ ဒီပုံကတော့ ကျွန်တော့်အသိအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ 70-300mm lens နဲ့ရိုက်ထားတာပါ။ ဝေဖန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ The Lady ဇာတ်ကားကို လာမည့် အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ စပြီး ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The story of pro-democracy activist Aung San Suu Kyi and the academic and writer Michael Aris;atrue story of love set against political turmoil.
Writer: Rebecca Frayn (screenplay)
Stars: David Thewlis, Michelle Yeoh and William Hope
နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓမ္မစာပေနှင့် မြန်မာစာသင်တန်းဖွင့်မည်
လန်ဒန်မြို့ သာသနရံသီဝိဟာရ ဆရာတော်များ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓမ္မစာပေနှင့် မြန်မာစာသင်တန်းကို သြဂုတ်လ (၉) ရက်၂၀၁၁ မှ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက် ၂၀၁၁ ထိ နှစ်ပတ်တိတိ သင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်ကတော့ နေ့လည် (၁) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ သာသနရံသီဝိဟာရ ဖုန်း - 02082050221 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။